Sanjib Chaudhary, mpanoratra amin’ny Global Voices teratany, miarahaba avy ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 8:15 GMT
Sanjib teo amin'ny Skype avy ao Kathmandu, Nepal. Pikantsary, Dec 18, 2014.
I Nepal dia io firenena iray ao Himalaya io, misy mponina 28 tapitrisa izay miitatra eo anelanelan'ireo firenena roa tena be mponina indrindra eto ambonin'ny tany, Shina sy India. Azy ny tendrombohitra 10 avo indrindra amin'ireo 14 erantany, sy ny tendrombohitra Everest (8 848 m), ary efa hatramin'ny taonjato iray mahery no ambohimpihaonana goavana iray ho an'ireo mpihanika tendrombohitra erak'ireo tanibe rehetra. Mandray anjara be amin'ny orinasan'ny fizahantany io asa io. Ary nandritra ireo taona 1960 sy 1970, ny renivohitra, Kathmandu ho an'ireo Tandrefana no anisan'ny iray amin'ireo fiantsonana voalohany indrindra amin'ny lalankely malaza ‘hippie’ (na malaza ratsy).
Nandritra ireo taona roapolo farany, nomarihan'ireo hafanana ara-politika ny tantaran'i Nepal. Ny taona 2007, nanjary lasa Repoblika ilay Nepal fitondram-panjaka hatry ny elabe.
Farafaharatsiny, izay aloha no mba fantatry ny ankamaroantsika momba an'i Nepal. Fa mbola misy ireo hafa maro ankoatran'io.
Araka ny fomba Bodista, teraka tao Lumbini i Gautama Buddha, ankehitriny any Nepal maoderina, ary mirehareha ny amin'izany ireo vahoaka Nepaley ankehitriny. Toeram-ponenan’ireo bibidia ihany koa i Nepal toa ireo lalomena tokantandroka, elefanta ary ireo tigra.
Ity vaovao ity sy ireo maro hafa rehetra dia hahafahanao mamaky an'ireo blaogy telo maharendrika nosoratan'i Sanjib Chaudhary, sankuchy (blaoginy fiasàny), tharuculture (Feon'i Tharus, loharano tsy mety ritra amin'ireo tantara, lahatsary ary sary mikasika ireo fomba nentim-paharazana) ary ny yetaautaa (izay midika hoe “eto-ery”, “diarin'ny mpitsangatsangana” sy ireo maro hafa).
Saingy raha te-hahalala mikasika ny fiainan'ny Nepaley isanandro ianao, na politika io, na fanatanjahantena, na fikatrohanna, na ny fiarovana an’ireo biby, ny sakafo mafilotra…, ny loharanom-baovao tsara indrindra dia ny lahatsoratr'i Sanjib ho an'ny tambajotra Global Voices – Misy iraika ambiny folo izy ireo hatramin'ny anio, nadika malalaka ao amin'ireo pejin-tranonkalan'ny Lingua.
Tamin'ny herinandro lasa, nahafinaritra ahy ny niresaka nivantana tamin'i Sanjib teo amin'ny Skype avy any Kathmandu, ary nahafantatra bebe kokoa an'ireo tantarany sy izay nitondra azy hanjohy ny GV. Mpiofana ho injeniera simika, niasa nandritra ny roa taona izy aloha teo amin'ny sehatry ny indostria tao Nepal, avy eo, 10 taona lasa izay nanjary lasa manampahaizana manokana amina marika sy serasera. Mpandray anjara tamina tranonkalam-baovao Koreana ifandrimbonana tamin'ny OhmyNews nandritra ny fotoana malalaka nanànany, nikaroka median'olontsotra azo atao fanolo izy. Tamin'ny taona, 2013, nahita ny GV izy. Nirotsaka ho mpanoratra izy rehefa nanatona ny tonian-dahatsoratray teo an-toerana ho an'i Azia Atsimo, Rezwan, izay nandefasany an'ireo lahatsoratra etsy aloha ireo. Tsy nihevitra ny tenany ho toy ny mpandray anjara tsy tapaka izy: rehefa misy zavatra goavana mitranga mahakasika an'i Nepal, miditra amin'ireo media sosialy izy, mitrandraka hevitra ary mikatsaka hanolotra fijery hafa tsy toy ny an'ireo media mahazatra. Tsy manakana azy tsy handray anjara matetika koa amin'ireo gazety akory izany.
Ankoatran'io fiainana tena rempotra io, Sanjib, izay mihevitra ny tenany ho toy ny “mpamaky mazoto sy matimatin'ny fanatanjahantena”, ihany koa dia mpitsangatsangana mafana fo, avy amin'i Azia Atsinanana sy Atsimo hatrany Eoropa ary any Amerika Atsimo.
Amin'izao andro izao, mandefa tsikiny mamiritra i Sanjib, avy any Rajbiraj, tanàna kely iray atsinanan'i Nepal, miaraka amin'ny lahatsorany fohy mikasika an'io toerana io.
Hifankahita indray ao amin'ny GV mandritra ny Fihaonambe GV 2015 any an-tanànan'i Cebu ry Sanjib!
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 ora izay